ကိုယျ့ခဈြသူကိုတကယျခဈြတယျဆို ဥပက်ခာတှမေပေးမိပါစနေဲ့ - Amawpyay
သူတို့လညျး နှလုံးသား နဲ့လူပါအသကျမရှငျခငျြလောကျအောငျ နာကငျြသှားတကျပါတယျ ဖတျရငျး ဖတျရငျးမကျြရညျမကအြောငျထိမျးနျော မောငျငါ နမေကောငျးဘူး ဒီနဖေုနျးမဆကျတော့ဘူး နျော မကျဆကေို့ကွညျ့ပွီးသူမနူတျခမျးကိူအရုပျဆိုးစှာမဲ့ပဈလိုကျတယျရမလား။
ဒီလိုမြိုးသူငယျခငျြးတှရှေမှေ့ာဆိုသူမသူ့ကိုအရမျးနိုငျသညျအခုဆိုအခုပဲဒါလိုခငျြတယျရမှဟိုဟာလိုခငျြတယျဆိုရမှသူမကတ ဇှတျထိုးနိုငျသညျ။ နငျ့ကောငျလေးနငျ့ကို အရမျးခဈြတာ နျော နငျ့မကျြနှာတဈခကျြပကျြတာနဲ့ ပွာနတောပဲ ဂရုစိုကျတာဒီအပွောတှမှောသူမသာယာနခေဲ့တာ။သူမကောငျလေးအပျေါမှာ သူမအရမျးဆိုးမှနျးအရမျးနိုငျမှနျးသူမကိုယျတိုငျမလြေ့ော့နမေိကာာ ဥပက်ခာတှပေေးနမေိတာကိုသူမ မသိခဲ့အခုလညျး။
ဖုနျးမဆကျတော့ဘူးနျော ဆိုတဲ့မကျဆကွေ့ောငျ့ စိတျတျုနကောလကျကအလိုအလြောကျ ဖုနျးနံပါတျဆီနှိပျမိလကျြဟလို ခဈြလေးဘာခဈြလေးလညျးခုမှဘာလဲဖုနျးမဆကျတာ စိတျကုနျနပွေီ လားမဟုတျတာ ဘာလို့စိတျကုနျရမှာလညျးတကယျပါ မောငျနမေကောငျးလို့အပိုတှေ ပွောမနပေါနဲ့ ကောငျမလေးစကားကွောငျ့သူ့ရငျဘကျထဲအောငျ့တကျသှားတယျ။
သူအကောငျးဆုံးပေးဆပျထားပါတယျသူအတကျနိုငျဆုံး အလြော့ပေးထားပါတယျ သူကသူမရဲ့ကြှနျတဈကောငျလို အကောငျးဆုံးနထေိုငျခဲ့ပါတယျ သူ့ရဲ့ မာနတှသေိကျခာတှေ သူမရဲ့ခှရငြေးမှာ ဝပဆြငြးထားပါလကွသြူမ ပှောခဲ့တာကအပို တှပေါတဲ့လား​ ယောကျြားတနျမဲ့ မကျြရညျကဝဲတယျသူခပျဖိဖိအံကွိတျရငျး.ဆကျပွောနရေငျပသနာတကျတော့မှာ
ကွိုသိတဲ့စိတျကဖုနျးခဖြို့ကိုဦးတညျနလေကျြထို့အတူရငျဘကျက အဆမတနျအောငျ့တကျနကောနာကငျြမှုကဘာနဲ့မှမတူ ခဈြလေးမောငျဖုနျးခလြိုကျတော့ မယျ တူ သူ့စကားမဆုံးခငျမှာပဲ ကောငျမလေး ဖုနျးခသြှားတယျ။
စိတျဆိုးသှားပွီ စိတျဆိုးရငျသူ့ကိုထားတကျတာသူဘယျလိုမှမနတေတျဖုနျးနံပါတျ လေးပွနျနိပျရငျးချေါလိုကျတော့ ထငျမှတျထားတဲ့အတိုငျးစကျပိတျထားပါတယျ။ဟုတျတယျငါမှားတာ ကိုယျ့ ခဈြသူကိုဂရုမစိုကျနိုငျတဲ့ငါမှားတာအခနျးထဲကပစ်စညျး တှပေဈပေါကျလှငျ့ပဈရငျးမကျြရညျကအတိုငျးဆမဲ့စှာဖုနျးလေးကဝငျပါတယျ။
သို့ပမေဲ့ မကိုငျခဲ့ပါနောကျဆုံး သူ့စိတျတှကေစဉျ့ကလြားဖွဈကာသူ့ကိုသူအဆုံးစီရငျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျအိပျဆေးတှလေကျတဈဆုပျမော့သောကျရငျးနောကျဆုံးအကွိမျဖုနျးချေါလိုကျကာမကိုငျခဲ့ပါကိုငျလိုကျပါဟယျနငျကလညျးသူ့ကိုသနားပါတယျ ဘယျနှဈခါရှိနပွေီလဲချေါနတောငါ့တို့ကောငျလေးတှဆေို အဲ့လောကျ စိတျမရှညျဘူးနပေါအုနျးဟနောကျတဈခါဆိုငါကိုငျမယျဖုနျးလေးကသြှားခဲ့တယျ။
ကောငျမလေးနောကျထပျအဝငျကောလေးကိုစောငျ့နပေါတယျစောနကနောကျဆုံးအကွိမျဖုနျးဆကျတယျဆိုတာ သူမမသိခဲ့ဘူဟဲ့မချေါတော့ဘူးကွညျ့ငါ့အဲ့ဒါတှစေိတျတိုတာအလိုမကစြှာစူပုတျနရေငျးဖုနျးကို စိုကျကွညျ့နမေိကာဟဲ့ နငျလှနျတာလေ သူချေါနတောအကွိမျကွိမျ နငျကိုငျခဲ့လို့လား နငျသူ့ကိုမခဈြဘူးဆိုလညျး ဖတျြလိုကျပါဒီလောကျထိနှိပျစကျဖို့မလိုဘူးထငျတယျ။
သူမကသူ့ကိုမခဈြဘူးတဲ့လားဟငျ့အငျးမဟုတျတာဘာလို့မခဈြရမှာလညျးခဈြတာပေါ့ အသညျးနငျ့အောငျခဈြတာဒါမဲ့သူမထုပျမပွခဲ့တာဘာလို့ဖတျြရမှာလညျးငါသူ့ကိုအရမျးခဈြတာဟ နငျသူ့ကို ဥပက်ခာ ပွုတာတှေ စိတျဆိုးရငျ ဖုနျးမကိုငျတာတှဖေုနျးစကျပိတျထားတာတှေ သူအရမျးခံစားနရေတာနငျသူ့ကို အရမျးနိုငျလှနျးတယျ။
ငါသူ့အပျေါအရမျးဆိုးနခေဲ့တာလားဘာရယျဆိုးနခေဲ့တာလားဟုတျလားနငျ့ကိုနငျမသိဘူးလား နငျအရမျးဆိုးတာနငျ့အရမျးအနိုငျယူတာနငျ့အကငျြ့တှေ ပွငျသငျ့နပွေီ မဟုတျရငျသူကနငျ့ကိုစိတျပတျြသှားလိမျ့မယျ ဘာစိတျပတျြသှားလိမျ့မယျ ဟုတျလားဟုတျတယျလဘေယျသူကကိုယျ့ကိုဂရုမစိုကျတဲ့သူကို အခြိနျကွာကွီးဖတျတှယျနမေလဲကွာလာရငျ သူလညျး စိတျပတျြလာမှာပဲ
သူလညျး နှလုံးသား နဲ့လူပါ နငျအရမျးမဆိုးပါနဲ့ငါဘာလုပျသငျ့လဲဟငျဟာဖုနျးပွနျချေါလေ သူမဖုနျးနံပါတျ လေးတှေ နိပျကာချေါလိုကျသညျသို့ပမေဲ့မကိုငျခဲ့ပါ ၁ခါ၂ခါ၃ခါသညျးခံ နိုငျစှမျးမရှိတော ဘာလို့မကိုငျတာလဲတောကျဈတှကွေ့သေးတာပေါ့ ဟဲ့ဘာလဲအခုတော့နငျစိတျတိုနပွေီလားနငျချေါတာသုံးလေးခါအပွငျမပိုဘူးနျော။
သူနငျ့ကိုချေါတာအဝငျကော၃၀ကြျောနပွေီ နငျကိုငျခဲ့လို့လားတျောပွီဟာငါသူ့အိမျသှားမယျ သူမစိတျတိုမှုစိုးရိမျမှုနဲ့အတူမောငျ့အိမျကို ခွလှေမျးတှဦေးတညျနမေိတယျ မောငျခဈြလေးကိုမုနျးသှားပွီလားဟငျ့ အငျးမဟုတျဘူး ခဈြလေးမောငျ့ကိုအရမျးခဈြတာပါ။
ခဈြလေး ဥပက်ခာ တှေ တမငျပေးခဲ့တာမဟုတျခဲ့ရပါဘူး မောငျရယျအိမျတံခါးလေးက ပှငျ့နလေကျြ သူမအိမျထဲဝငျလိုကျကာမောငျချေါလိုကျသညျသို့ပမေဲ့တုနျ့ပွနျသံထှကျမလာခဲ့ပါ မောငျမောငျအခနျးတံခါးလေးပှငျ့နလေကျြဝငျလိုကာမွငျလိုကျရတဲ့ မွငျကှငျးကဆေးလုံးလေးတှကေကွမျးပွငျပျေါ ပွနျ့ကြဲလကျြထိုနံဘေးမှာတော့
အရမျးခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ ပါးပွငျထပျ မကျြရညျ စကျမြားစှာနဲ့ ငွိမျသကျစှာနဲ့ လဲလြောငျး နပေါတယျမယုံနိုငျပါ ဟငျ့အငျးမဟုတျဘူးမောငျတကယျမဟုတျဘူး။
အခနျးတဈခုလုံးသူမဓာတျပုံ တှနေဲ့ ပွညျ့နလေကျြအလှရိုကျထားတဲ့ပုံမဟုတျ သူမရဲ့လှုပျရှားမှုတိုငျးကိုအသေးစိတျ ရိုကျထားသလို မောငျသူမ နှလုံးသားတှပေဲ့ကွှရေပါပွီ။
မောငျခဈြလေး မှားခဲ့ပါတယျ ခဈြလေးမောငျ့အပျေါ အရမျးဆိုးခဲ့ပါတယျခဈြလေး မောငျ့ကို အရမျးခဈြပါတယျ ပွနျလာပေးပါ မောငျရယျမောငျ့ ရဲ့ အသကျမဲ့နတေဲ့ ခန်ဒာကိုယျကို ပှဖေ့တျရငျး အရူးမလေးလိုငိုမိရပါပွီ ခဈြလေးနောငျတရပါပွီမောငျရဲ့မဆိုးတော့ပါဘူး မောငျ့လိမျလိမျမာမာနပေ့မယျ။
မောငျရခဈြလေးလိမျလိမျမာမာနပေ့မယျခဈြလေးကိုသနားပါ အဲ့လိုကွီးမနပေါနဲ့ ထပါဟငျ့ဟငျ့ဟငျ့ဟငျ့သူမတဈသိမျ့သိမျ့ရှိုကျငိုမိရပါပွီ သူမအရမျးခဈြတဲ့ကောငျလေးက သူမအနားမှာရှိနပေါတယျသူမမမွငျနိုငျခဲ့ပါ သူမကိုယျ့ပှဖေ့တျရငျး နှဈသိမျ့ နတေဲ့သူမကောငျလေးစကားတှသေူမမကွားနိုငျတော့ပါ
ကိုယျ့ကိုအရမျးခဈြတဲ့သူအပျေါဆိုးတာကတျောရုံလောကျပဲဆိုးသငျ့ပါတယျ တခါတလမှောအဆုံးသတျဖို့ထိ စိတျတှညေဈသှားတတျပါတယျ။ အခဈြဆိုတာဆိုးတိုငျးလညျးမကောငျး ပါဥပက်ခာဆိုတာတကယျခဈြမိသူအတှကျ အရှငျလကျလကျငရဲကနြသေလို ပွငျးထနျလှနျးလှပါတယျကိုယျ့ခဈြသူကိုတကယျခဈြတယျဆိုဥပက်ခာတှမေပေးမိပါစနေဲ့
သူတို့လည်း နှလုံးသား နဲ့လူပါအသက်မရှင်ချင်လောက်အောင် နာကျင်သွားတက်ပါတယ် ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းမျက်ရည်မကျအောင်ထိမ်းနော် မောင်ငါ နေမကောင်းဘူး ဒီနေဖုန်းမဆက်တော့ဘူး နော် မက်ဆေ့ကိုကြည့်ပြီးသူမနူတ်ခမ်းကိူအရုပ်ဆိုးစွာမဲ့ပစ်လိုက်တယ်ရမလား။
ဒီလိုမျိုးသူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာဆိုသူမသူ့ကိုအရမ်းနိုင်သည်အခုဆိုအခုပဲဒါလိုချင်တယ်ရမှဟိုဟာလိုချင်တယ်ဆိုရမှသူမကတ ဇွတ်ထိုးနိုင်သည်။ နင့်ကောင်လေးနင့်ကို အရမ်းချစ်တာ နော် နင့်မျက်နှာတစ်ချက်ပျက်တာနဲ့ ပြာနေတာပဲ ဂရုစိုက်တာဒီအပြောတွေမှာသူမသာယာနေခဲ့တာ။သူမကောင်လေးအပေါ်မှာ သူမအရမ်းဆိုးမှန်းအရမ်းနိုင်မှန်းသူမကိုယ်တိုင်မေ့လျော့နေမိကာာ ဥပက္ခာတွေပေးနေမိတာကိုသူမ မသိခဲ့အခုလည်း။
ဖုန်းမဆက်တော့ဘူးနော် ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ကြောင့် စိတ်တ်ုနေကာလက်ကအလိုအလျောက် ဖုန်းနံပါတ်ဆီနှိပ်မိလျက်ဟလို ချစ်လေးဘာချစ်လေးလည်းခုမှဘာလဲဖုန်းမဆက်တာ စိတ်ကုန်နေပြီ လားမဟုတ်တာ ဘာလို့စိတ်ကုန်ရမှာလည်းတကယ်ပါ မောင်နေမကောင်းလို့အပိုတွေ ပြောမနေပါနဲ့ ကောင်မလေးစကားကြောင့်သူ့ရင်ဘက်ထဲအောင့်တက်သွားတယ်။
သူအကောင်းဆုံးပေးဆပ်ထားပါတယ်သူအတက်နိုင်ဆုံး အလျော့ပေးထားပါတယ် သူကသူမရဲ့ကျွန်တစ်ကောင်လို အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့ မာနတှသေိက်ခာတှေ သူမရဲ့ခွရေငျးမှာ ဝပျဆငျးထားပါလကျြသူမ ပွောခဲ့တာကအပို တှပေါတဲ့လား​ ယောက်ျားတန်မဲ့ မျက်ရည်ကဝဲတယ်သူခပ်ဖိဖိအံကြိတ်ရင်း.ဆက်ပြောနေရင်ပသနာတက်တော့မှာ
ကြိုသိတဲ့စိတ်ကဖုန်းချဖို့ကိုဦးတည်နေလျက်ထို့အတူရင်ဘက်က အဆမတန်အောင့်တက်နေကာနာကျင်မှုကဘာနဲ့မှမတူ ချစ်လေးမောင်ဖုန်းချလိုက်တော့ မယ် တူ သူ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲ ကောင်မလေး ဖုန်းချသွားတယ်။
စိတ်ဆိုးသွားပြီ စိတ်ဆိုးရင်သူ့ကိုထားတက်တာသူဘယ်လိုမှမနေတတ်ဖုန်းနံပါတ် လေးပြန်နိပ်ရင်းခေါ်လိုက်တော့ ထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းစက်ပိတ်ထားပါတယ်။ဟုတ်တယ်ငါမှားတာ ကိုယ့် ချစ်သူကိုဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့ငါမှားတာအခန်းထဲကပစ္စည်း တွေပစ်ပေါက်လွှင့်ပစ်ရင်းမျက်ရည်ကအတိုင်းဆမဲ့စွာဖုန်းလေးကဝင်ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ မကိုင်ခဲ့ပါနောက်ဆုံး သူ့စိတ်တွေကစဥ့်ကလျားဖြစ်ကာသူ့ကိုသူအဆုံးစီရင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အိပ်ဆေးတွေလက်တစ်ဆုပ်မော့သောက်ရင်းနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖုန်းခေါ်လိုက်ကာမကိုင်ခဲ့ပါကိုင်လိုက်ပါဟယ်နင်ကလည်းသူ့ကိုသနားပါတယ် ဘယ်နှစ်ခါရှိနေပြီလဲခေါ်နေတာငါ့တို့ကောင်လေးတွေဆို အဲ့လောက် စိတ်မရှည်ဘူးနေပါအုန်းဟနောက်တစ်ခါဆိုငါကိုင်မယ်ဖုန်းလေးကျသွားခဲ့တယ်။
ကောင်မလေးနောက်ထပ်အဝင်ကောလေးကိုစောင့်နေပါတယ်စောနကနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတာ သူမမသိခဲ့ဘူဟဲ့မခေါ်တော့ဘူးကြည့်ငါ့အဲ့ဒါတွေစိတ်တိုတာအလိုမကျစွာစူပုတ်နေရင်းဖုန်းကို စိုက်ကြည့်နေမိကာဟဲ့ နင်လွန်တာလေ သူခေါ်နေတာအကြိမ်ကြိမ် နင်ကိုင်ခဲ့လို့လား နင်သူ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုလည်း ဖျတ်လိုက်ပါဒီလောက်ထိနှိပ်စက်ဖို့မလိုဘူးထင်တယ်။
သူမကသူ့ကိုမချစ်ဘူးတဲ့လားဟင့်အင်းမဟုတ်တာဘာလို့မချစ်ရမှာလည်းချစ်တာပေါ့ အသည်းနင့်အောင်ချစ်တာဒါမဲ့သူမထုပ်မပြခဲ့တာဘာလို့ဖျတ်ရမှာလည်းငါသူ့ကိုအရမ်းချစ်တာဟ နင်သူ့ကို ဥပက္ခာ ပြုတာတွေ စိတ်ဆိုးရင် ဖုန်းမကိုင်တာတွေဖုန်းစက်ပိတ်ထားတာတွေ သူအရမ်းခံစားနေရတာနင်သူ့ကို အရမ်းနိုင်လွန်းတယ်။
ငါသူ့အပေါ်အရမ်းဆိုးနေခဲ့တာလားဘာရယ်ဆိုးနေခဲ့တာလားဟုတ်လားနင့်ကိုနင်မသိဘူးလား နင်အရမ်းဆိုးတာနင့်အရမ်းအနိုင်ယူတာနင့်အကျင့်တွေ ပြင်သင့်နေပြီ မဟုတ်ရင်သူကနင့်ကိုစိတ်ပျတ်သွားလိမ့်မယ် ဘာစိတ်ပျတ်သွားလိမ့်မယ် ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဘယ်သူကကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူကို အချိန်ကြာကြီးဖတ်တွယ်နေမလဲကြာလာရင် သူလည်း စိတ်ပျတ်လာမှာပဲ
သူလည်း နှလုံးသား နဲ့လူပါ နင်အရမ်းမဆိုးပါနဲ့ငါဘာလုပ်သင့်လဲဟင်ဟာဖုန်းပြန်ခေါ်လေ သူမဖုန်းနံပါတ် လေးတွေ နိပ်ကာခေါ်လိုက်သည်သို့ပေမဲ့မကိုင်ခဲ့ပါ ၁ခါ၂ခါ၃ခါသည်းခံ နိုင်စွမ်းမရှိတော ဘာလို့မကိုင်တာလဲတောက်စ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ဟဲ့ဘာလဲအခုတော့နင်စိတ်တိုနေပြီလားနင်ခေါ်တာသုံးလေးခါအပြင်မပိုဘူးနော်။
သူနင့်ကိုခေါ်တာအဝင်ကော၃၀ကျော်နေပြီ နင်ကိုင်ခဲ့လို့လားတော်ပြီဟာငါသူ့အိမ်သွားမယ် သူမစိတ်တိုမှုစိုးရိမ်မှုနဲ့အတူမောင့်အိမ်ကို ခြေလှမ်းတွေဦးတည်နေမိတယ် မောင်ချစ်လေးကိုမုန်းသွားပြီလားဟင့် အင်းမဟုတ်ဘူး ချစ်လေးမောင့်ကိုအရမ်းချစ်တာပါ။
ချစ်လေး ဥပက္ခာ တွေ တမင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့ရပါဘူး မောင်ရယ်အိမ်တံခါးလေးက ပွင့်နေလျက် သူမအိမ်ထဲဝင်လိုက်ကာမောင်ခေါ်လိုက်သည်သို့ပေမဲ့တုန့်ပြန်သံထွက်မလာခဲ့ပါ မောင်မောင်အခန်းတံခါးလေးပွင့်နေလျက်ဝင်လိုကာမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကဆေးလုံးလေးတွေကကြမ်းပြင်ပေါ် ပြန့်ကျဲလျက်ထိုနံဘေးမှာတော့
အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ပါးပြင်ထပ် မျက်ရည် စက်များစွာနဲ့ ငြိမ်သက်စွာနဲ့ လဲလျောင်း နေပါတယ်မယုံနိုင်ပါ ဟင့်အင်းမဟုတ်ဘူးမောင်တကယ်မဟုတ်ဘူး။
အခန်းတစ်ခုလုံးသူမဓာတ်ပုံ တွေနဲ့ ပြည့်နေလျက်အလှရိုက်ထားတဲ့ပုံမဟုတ် သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုအသေးစိတ် ရိုက်ထားသလို မောင်သူမ နှလုံးသားတွေပဲ့ကြွေရပါပြီ။
မောင်ချစ်လေး မှားခဲ့ပါတယ် ချစ်လေးမောင့်အပေါ် အရမ်းဆိုးခဲ့ပါတယ်ချစ်လေး မောင့်ကို အရမ်းချစ်ပါတယ် ပြန်လာပေးပါ မောင်ရယ်မောင့် ရဲ့ အသက်မဲ့နေတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကို ပွေ့ဖတ်ရင်း အရူးမလေးလိုငိုမိရပါပြီ ချစ်လေးနောင်တရပါပြီမောင်ရဲ့မဆိုးတော့ပါဘူး မောင့်လိမ်လိမ်မာမာနေပ့မယ်။
မောင်ရချစ်လေးလိမ်လိမ်မာမာနေပ့မယ်ချစ်လေးကိုသနားပါ အဲ့လိုကြီးမနေပါနဲ့ ထပါဟင့်ဟင့်ဟင့်ဟင့်သူမတစ်သိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငိုမိရပါပြီ သူမအရမ်းချစ်တဲ့ကောင်လေးက သူမအနားမှာရှိနေပါတယ်သူမမမြင်နိုင်ခဲ့ပါ သူမကိုယ့်ပွေ့ဖတ်ရင်း နှစ်သိမ့် နေတဲ့သူမကောင်လေးစကားတွေသူမမကြားနိုင်တော့ပါ
ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်တဲ့သူအပေါ်ဆိုးတာကတော်ရုံလောက်ပဲဆိုးသင့်ပါတယ် တခါတလေမှာအဆုံးသတ်ဖို့ထိ စိတ်တွေညစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာဆိုးတိုင်းလည်းမကောင်း ပါဥပက္ခာဆိုတာတကယ်ချစ်မိသူအတွက် အရှင်လက်လက်ငရဲကျနေသလို ပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်ကိုယ့်ချစ်သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုဥပက္ခာတွေမပေးမိပါစေနဲ့
ကိုယ့်ရည်းစားကို အကုန်မပြောပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့
ကိုယ့်ရည်းစားကို အကုန်မပြောပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ တချို့တွေက် ကိုယ့်ရည်းစားကို သေးသေးလေးက အစအကုန် အစေအဆုံးပြောပြတတ်ကြတယ်။ ရင်ဖွင့်တတ်ကြတယ်။ ရင်ဖွင့်တာ ၊ ပြောပြတာမျိုးက ကိစ္စမရှိပေမယ့်လည်း တစ်ချို့ အကြောင်းအရာတေလးတွေကျတော့ မပြောပြတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီတော့ နောက်လည်း ဆင်ခြင်လို့ရအောင် ကိုယ့်ရည်းစားကို အကုန်မပြောပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ က ဘာတွေလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အားနည်းချက် ကိုယ့် အားနည်းချက်တွေ ကို ကိုယ့်ရည်းစားမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ တခြားဘယ်သူ့ကိုမှ ထုတ်မပြောပြ သင့်ပါ ဘူး။ တည့်နေတဲ့ အချိန်၊ အဆင်ပြနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုသိထားပြီး ကိုယ့်အေါ် သနားတာမျိုး၊ ကြင်နာတာ မျိုးတွေ ရှိပါ လိမ့်မယ် ။ မတည့်တော့တဲ့အချိန်၊ …
ယောက်ျားတစ်ယောက် သင့်ကို ချစ်လာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းများ …!
ယောက်ျားတစ်ယောက် သင့်ကို ချစ်လာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းများ …! တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအာရုံကို ရဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ အလုပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အဲ့ဒီလူ ဟာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သူဖြစ်ရင် ပိုလို့တောင်ဆိုးပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သူ့ရဲ့ အနားကို ချဉ်းကပ်ရတဲ့ အလုပ် ဟာ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်က ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ တစ်ချို့အရာတွေကို သိထားရင်တော့ ဒါက အရမ်းတော့ မခက်ပါဘူး။ ချစ်ရတဲ့ Crush လေးကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစပြီး ချဉ်းကပ်ရမလဲ မသိတဲ့ မိန်းကလေး တွေ အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်တွေက အကြံပြု ထားတဲ့ ယောက်ျား …